March 3, 2015 – democracy for burma
#clip #အစိုးရအကြမ်းဖက်မှုနှင့််ကျောင်းသားကန့်ကွက်မှု. #ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ပန်ကြားချက်
On March 3, 2015 March 3, 2015 By Burma Myanmar newsIn ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ပန်ကြားချက်, Burma, MYANMAR, STUDENTSLeaveacomment
အစိုးရအကြမ်းဖက်မှုနှင့််ကျောင်းသားကန့်ကွက်မှု ****************************** ****************************** 2015/3/3–4:00pm(ဆူးလေ) ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ် စစ်ကြောင်းအားတားဆီးပိတ်ပင်မှု ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းရန်ကုန် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုကို ကျင့်သုံးမည်ဆိုပါကလက်ရှိအစိုးရရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (ရန်ကုန်ကျောင်သားသမဂ္ဂ) KTS#NLD 2015/3/3–6:19pm
Photo : ကိုဝိုင်ဝိုင်ကေ
ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ပန်ကြားချက် ၁- လက်ပံတန်းမှ သာယာဝတီ အထိ သပိတ်စစ်ကြောင်းပုံစံဖြင့် လမ်းလျှောက်ချီတက်မည် ။ ၂- သာယာဝတီမှ ရန်ကုန်အထိ ကိုယ်ပိုင်အစီစဉ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသော ကားများနဲ့သွားမည် ။ ၃- ကားများတွင် ကျောင်းသား သမဂ္ဂခွပ်ဒေါင်း အလံ လွှင့်ထူမည် ။ ၄- Viny ချိတ်ဆွဲထားသော ပြန်ကြားရေးကားမှ ကျောင်းသားသီချင်းများ ဖွင့်သွားမည် ။ ၅- ကားတန်းများကို မနှေး မမြန် ပုံမှန် မောင်းနှင်မည် ။. ၆- ရန်ကုန်မြို့ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်ရှိ ၁၉၂၀ ပထမ ကျောင်းသား သပိတ်မှောက် – – ကျောက်တိုင်ထူရာ ( သို့ မဟုတ်) ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ သမဂ္ဂဖြက်ခင်းပြင်သို့– – -အရောက်သွားကာအခမ်းအနားကို အချိန်ခတ္တ ခဏ ကျင်းပကာ – – -လူစုခွဲလျှက် ကိုယ့်အရပ်ဒေသ သို့ ပြန်ပြီး စာမေးပွဲများ ဆက်လက်ဖြေဆိုမည် ။ ၇- မိမိနေရပ် သို့ ပြန်ကြသည့် အခါ ကိုယ့် အစီအစဉ်နှင့် ပြန်ကြမည် ။ ၈- မိမိတို့ ယာဉ်တန်းနှင့် အတူ လုံခြုံရေး ကားများ လိုက်ပါနိုင်သော်လည်း – -မိမိတို့ကားတန်း၏ အရှေ့ နှင့် အနောက် မှ ခပ်ခွာခွာ လိုက်ပါပေးရမည် ။ အထက်ပါ တောင်းဆိုချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် အခု လက်ပံတန်းမှ သာယာဝတီ ထိုမှ တဆင့် ရန်ကုန်သို့ငြိမ်းချမ်းစွာ အိမ်ပြန်ခရီးကို စတင်နေချိန်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားဖြင့် တားဆီးခြင်းများ တွေ့ ကြုံနေရပါသည် ။ မိမိတို့ ခရီးစဉ်သည် လက်နက်မဲ့ ။ အကြမ်းမဖက် ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိမ်ပြန်သော ခရီးဖြစ်သည့် အတွက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားခြင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်း ဆက်လက် တားဆီးခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာ ညှိုနှိုင်း ဆောင်ရွတ်ပါရန် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အဖွဲ့ သို့ပန်ကြားလိုက်သည် ။ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ပင်မ စစ်ကြောင်း
!! #วันนี้ #ชาวเนตฯ #สนุกสนาน #กันใหญ่ !! #ไม่สวมหมวกกันน็อค”
On March 3, 2015 By Burma Myanmar newsIn ชาวเนต, นายก, สนุกสนานกันใหญ่, HONDA, PRAYUTHLeaveacomment
วันนี้ชาวเนตฯ สนุกสนานกันใหญ่ !!
‪#‎ตายแน่ไอ้พวกควายแดง‬ ..มาแดกดันก่อน ..จากกรณีลุงตู่ฯ “ไม่สวมหมวกกันน็อค” ….อย่าพลาดเชียวนะพวกมึงส์!!.. เฟสหมีตะปบจนตายเลือดไหลออกซิกๆแน่….อยากรู้เรอะ..ไปถามคู่กัดตลอดกาล @นัง “นะโม ตัสสะ” ในไลน์มันได้นะ !!. cr,cathay mee
#Thailand : PM #Prayut rides #big #bike #wearing #cap
On March 3, 2015 March 3, 2015 By Burma Myanmar newsIn BIG BIKE, PM PRAYUTH, ThailandLeaveacomment
Prime Minister Gen Prayut Chan-o-cha surprised his body guards and media representatives when he unexpectedly startedaBig Bike and rode off around Government House. The Honda CBR 250 cc big bike belongs toagovernment official who brought his motorcycle for service check by vocational students inaservice booth inside Government House. The booth was set up as part of the Office of the Vocational Education Commission’s scheme to encourage vocational students to contribute to the communities. Gen Prayut inspected the service booth of the students and tested the big bike coming to receive the service. Without telling anyone, he switched on the engine, pressed the horn and shouted jokingly for everybody surrounding him to keep off, or he would ram at them. He then rode off without wearingahelmet exceptared cap, forcing his body guards, media members to run after. Gen Prayuth circled around the compound of the Government House forafew minutes and retuned to the booth, smilingly said “the bike is powerful” .